Website အသစ်သည် Coronavirus အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ဘာသာစကား ၂၅ မျိုးဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။ - Corona Denmark
Website အသစ်သည် Coronavirus အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ဘာသာစကား ၂၅ မျိုးဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။
ဧပြီ 4, 2020
Comments Off on Website အသစ်သည် Coronavirus အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ဘာသာစကား ၂၅ မျိုးဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။
ဤ website နှင့် hotline အသုံးပြု၍ သင်၏ဘာသာစကားဖြင့် coronavirus နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို အဖြေရနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ hotline နှင့် chatting တွင် ဘာသာစကား ၂၅ မျိုးဖြင့် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူများက တာဝန်ယူပါသည်။ နေ့တိုင်: (kl. 14.00-16.00) နာရီ အတွင်း ၀န်ထမ်းတစ်ဦး နှင့် စကားပြောနိုင်ပြီး (သို့မဟုတ်) စာရေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ၀န်ထမ်းများထံတွင် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးဌာနမှ coronavirus နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပြီး မေးခွန်းအများစုကို ၎င်းတို့မှ ဖြေကြားနိုင်ပါသည်။
နေ့လည် kl 14-16 နာရီအတွင်း မဆက်သွယ်နိုင်လျှင် chatting fuction တွင် message ချန်ထား၍ သင့်မေးခွန်းများ၏အဖြေကို နောက်နေ့မှာ ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ websiteသည် ရွေးချယ်ထားသောသတင်းများနှင့် ဒိန်းမတ်အာဏာပိုင်များထံမှ အရေးကြီးသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်း ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။
Danish Refugee Council နှင့် Als Research တို့သည် ဤ website နောက်ကွယ်မှာရပ်တည်ပေးကြပြီး Novo Nordisk Fonden က ငွေကြေးဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော အသိပညာများသည် တိကျမှန်ကန်ပြီး နောက်ဆုံးသတင်း ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန် ဗဟိုဒိန်းမတ်အာဏာပိုင်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
Website အသစ်သည် Coronavirus အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ဘာသာစကား ၂၅ မျိုးဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။ ဧပြီ 4, 2020
Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Bevilling NNF20SH0062955